Coral Reef: ချစ်သူ့လက်ဆောင်
Shinlay said on June 16, 2010 at 10:12 PM
ချစ်သူပေးတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေဟာ ကျမအတွက်လည်း ဘယ်တော့မှ မေ့မရနိုင်တဲ့ အရာတွေပါပဲ။ ပြန်မြင်တိုင်း ရင်ခုန်ဆဲ။ အမှတ်ရနေဆဲပါ။
Anonymous said on June 16, 2010 at 10:12 PM
ဖတ်ရတာ ဂျူးဝတ္တု ဖတ်ရသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါ ဇွန်ရေးတာပါနော်။
ဝမ်းနည်းစရာလည်း ကောင်းတယ်။ မောင်က ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။ ချစ်သူသက်တမ်း ၁၀နှစ်တဲ့။
kaungkinpyar said on June 17, 2010 at 1:12 AM
ဒီလက်ဆောင်လေးတွေ တန်းဖိုးထား နေတုန်းဆိုတာ မောင် သိနေမှာပါ..း)
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on June 17, 2010 at 1:44 AM
အဲသလိုလွမ်းတတ်သူတွေအတွက်ကတော့ ကဗျာတွေ..စာတွေက ထွက်နေတတ်တော့တာပါပဲလေ..
စန္ဒကူး said on June 17, 2010 at 7:23 AM
အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲသွားကြတာ လား။
စိတ်မကောင်းဘူးရယ်.. ဖတ်ရင်းနဲ့ ၀မ်းနည်းတယ်။
Anonymous said on June 17, 2010 at 7:49 AM
:( ဖတ်ရတဲ့သူ ရင်ထဲလွမ်းတွေကူးသွားအောင် ရေးတတ်တယ်။
မိုးခါး said on June 17, 2010 at 8:22 AM
၀မ်းနည်းတယ် ..း((
noblemoe said on June 17, 2010 at 8:33 AM
စပိုင်ချစ်သူထဲကလို ပြန်ပေါ်လာရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော် ....
မမရယ် ဘဝမှာ သာယာချမ်းမြေ့မှုတွေနဲ့သာကြုံနိုင်ပါစေရန်တောင်းဆုပြုလိုက်ပါတယ်နော်...
Rita said on June 17, 2010 at 8:48 AM
အချိန်ကာလတွေ ကုန်လွန်သွားတာနဲ့အမျှ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွေက ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။ စိတ်နှလုံးမှာတော့ အမှတ်တရတွေသာ ထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
SDL said on June 17, 2010 at 9:42 AM
မောင် ကဘယ်ရောက်သွားလို့လဲ.. ဝမ်းနည်းစရာကြီး။
အင်ကြင်းသန့် said on June 17, 2010 at 10:36 AM
မမ....အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်။ တကယ်ပြောတာ။ မမအနေနဲ့ ဘယ်လောက်တောင်ခံစားရပြီး ဒီပိုစ့်ကို ရေးရမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းမိတယ်....
Anonymous said on June 17, 2010 at 10:50 AM
" 13/03/07 " ဇွန့် ကို အဲ့ပို့စ်လေးနဲ့ စသိခဲ့တာ..
Wunna said on June 17, 2010 at 11:19 AM
Moe Cho Thinn said on June 17, 2010 at 11:29 AM
မောင့်ကိုယ်စား ထားခဲ့လေသလားးး :(
ဖိုးစိန် said on June 17, 2010 at 1:02 PM
မောင်မရှိတဲ့ဘဝမှာ ရပ်တည်လာတာကြာပြီးလေ.. နော်.
ဒါကြောင့် ဒါမျိုးစွဲလန်းနေရင် မောင်အတွက်လဲ မကောင်းဘူးလေ.
အပြုံးပန်း said on June 17, 2010 at 7:04 PM
မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ လက်ဆောင်တွေရဲ့ မေတ္တာတွေကို ခံစားရတယ်၊
သက်ဝေ said on June 18, 2010 at 7:30 AM
သူပေးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ လက်ဆောင်လေးတွေကို ညီမက ခုချိန်ထိ တယုတယ တန်ဖိုးထားနေ သုံးစွဲနေတာကို တနေရာရာကနေ သူ ကြည့်နေ မြင်နေ သိနေမှာပါ... ပြီးတော့ သူ ဇွန့်ကို လည်း ချစ်ခင် ကျေနပ်နေမှာပါ....
အိန္ဒြာ said on June 18, 2010 at 10:45 PM
ချစ်ကြည်အေး said on June 19, 2010 at 9:50 PM
ညီမဇွန်ရေ...ဘာပြောရမှန်း ၊ ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ရမှန်း မသိတာနဲ့...ဖတ်ပြီး မရေးဖြစ်ခဲ့တာ...။
ဇွန် ပြုံးပျော်နေတာလေးကိုပဲ မြင်ချင်လို့...
Moe Myint Tane said on June 21, 2010 at 10:21 PM
အမှတ်တရဆိုတာ နုနယ်တဲ့ အရွယ်မှာရှိခဲ့ရင် တစ်သက်လုံးအတွက် မေ့ရက်စရာ မရှိအောင်ကို သတိရနေမှာပါ...
heart touching ဖြစ်တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ပါ။
သက်ဝေ said on June 22, 2010 at 11:12 PM
လွမ်းစရာ ဒီပိုစ့်လေးကို သတိရနေလို့ နောက်တခေါက် လာဖတ်သွားပါတယ်...
Vista said on June 23, 2010 at 10:03 AM
မောင်က ဘယ်ရောက်သွားတာလည်း ။း(
AMK said on July 1, 2010 at 6:34 PM
ရေ စက် မကုန်ရင် မောင် နဲ့ ပြန်ဆုံ နိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်းရေ
Anonymous said on July 25, 2010 at 10:15 PM
အမရဲ့ မောင့်လက်ဆောင်တွေထက် "မောင်" ခေါ်သံလေးက ပိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်လို့ ....။
မအိန္ဒြာ ရဲ့ ကဗျာထဲက
"မောင် ရေ...." ခေါ်သံ လေးကလည်း အသက်ဝင် တယ်လို့ .....။